En Omeo fialamboly aho liana amin'ny sinema sy mozika izahay, ka ireny no tena ifantohanay. Ho fanampin'izany, mifampiraharaha amin'ny karazana rehetra amin'izao fotoana izao sy tamin'ny vanim-potoana teo aloha isika, manomboka amin'ny sinema ady malaza indrindra ka hatramin'ny sarimihetsika mihetsika mahery indrindra.
Eo amin'ny sehatry ny mozika dia tianay ny mozika jazz, flamenco ary punk. Inona no mifangaro, huh? Tsy azo atao izany raha tsy amin'ny antsika ekipa fanonta, izay mifameno tanteraka mba hahatonga an'i Dame Ocio ho tranonkala miteny espaniola feno indrindra amin'ireo lohahevitra ireo.
Sarimihetsika foronina siansa
Sinema araka ny karazany
Resadresaka amin'ny sarimihetsika
Premieres amin'ny sarimihetsika
Kaonseritra sy fety
Mozika vy mavesatra